Tag: shamwari mazana mashanu. | Martech Zone
Tag: shamwari mazana mashanu.
Zvakanakira Vatengi Kuvimbika Zvirongwa
Muvhuro, Ndira 4, 2016 Chishanu, December 15, 2017 Douglas Karr
Kunyangwe muB2B, agency yedu iri kutarisa maitiro atinogona kupa vedu vatengi kukosha kupfuura kwedu chibvumirano chisungo. Izvo hazvina kukwana chete kuendesa mhedzisiro zvakare - makambani anoda kudarika zvinotarisirwa. Kana bhizinesi rako riri repamusoro-kutengeserana / rakaderera mari, chirongwa chekuvimbika kwevatengi chakakosha kwazvo pamwe neiyo tekinoroji kuitisa. Kune mazana matatu nemakumi matatu emamiriyoni evamiriri vehurongwa hwekuvimbika muUS, 3.3 pamhuri 29% yevatendi vepurogiramu yekutendeka vanoita madhora zviuru zana kana kudarika